Imbuyekezo kutyalo-mali (i-ROI) yamaQonga okuZenzekelayo okuThengisa | Martech Zone
Kunyaka olandelayo, ukuThengisa okuZenzekelayo kuguqula ama-30! Ewe, ufunda ngokuchanekileyo. Kwaye ngelixa kubonakala ngathi le teknoloji ikuyo yonke indawo incinci ngokwaneleyo ukuba isenamaqhakuva, inyani kukuba iqonga lokuzenzekelayo lokuthengisa (MAP) utshatile, unenjana, kwaye kunokwenzeka ukuba aqale usapho kungekudala.
KwiMfuno yeNtwasahlobo yamva nje ingxelo yophando, Siphonononge imeko yetekhnoloji yokuthengisa esizisebenzelayo namhlanje. Siveze ukuba phantse isiqingatha semibutho sisasokola ngokwenene ukulinganisa i-ROI yokuThengisa ngokuZenzekelayo. Ngaba samangaliswa? Hayi ncma. Ngelixa imarike ye-MAP ingaphezulu kwe-USD $ 4B namhlanje, imibutho emininzi ye-B2B isasokola ngokwenyani kwintengiso.
Iindaba ezimnandi zezokuba kwabo banako ukulinganisa i-ROI yokuThengisa ngokuZenzekelayo, iziphumo zomelele. I-51% yemibutho ijongene ne-ROI enkulu kune-10%, kwaye i-22% ibona i-ROI enkulu kune-22%.
Ndikrokrela ngamandla ukuba la manani ajongele phantsi kakhulu. Xa ucinga ukuba abathengi banamhlanje beemveliso ze-B2B kunye neenkonzo ziqhuba uninzi lwemfundo yazo kunye nenkqubo yokuthenga kwi-intanethi, kunzima ukucinga ukuba i-MAP ayibalulekanga njengeyona ntengiso yakho ivelisayo.
Indlela elungileyo yokujonga ixabiso kukucinga ngehlabathi apho iMAP ibingekho. Khawufane ucinge uqhuba umbutho wakho namhlanje ngaphandle kwesakhono sokwenza unxibelelwano lube ngokwakho kunye nenqanaba lohambo lomthengi. Okanye ukuchonga ezona zikhokelo zishushu kwaye uzidlulise phantse kwixesha-lokwenyani kumbutho wakho wentengiso. Khawufane ucinge ungabinayo injini yentengiso enokukhulisa ukukhokelela ekuphuculeni isantya.
Izitshixo zokuphucula i-ROI yokuThengisa ngokuZenzekelayo
Uphando lwethu lubonakalise imikhondo ephambili esikholelwa ukuba ibamba imibutho ekufezekiseni nasekuqondeni i-ROI efunekayo yokuThengisa. Eyona nto icace gca kukungakwazi ukulinganisa. Siyaqhubeka nokufumanisa ukuba uninzi lwemibutho yentengiso ihlala ihleli njengeyona nto iphambili ngokubaluleka kumaqela abo oHlaziyo lweShishini, ngezixhobo ezinqongopheleyo ezinikezelwe ukunceda abathengisi ukulinganisa intsebenzo. Ukunikezela ngetekhnoloji ye-analytics kunye neeNzululwazi ngeDatha ukuxhasa abathengisi kubalulekile.
Isithinteli sesibini esikhulu kukunqongophala kwabantu ukuqhuba amaqonga ngokufanelekileyo. Sibuze abaphenduli ukuba zeziphi izizathu eziphambili zokungasebenzisi izinto ezithile kwi-MAP yabo, kwaye i-55% ikhankanye ukunqongophala kwabasebenzi, ngelixa i-29% ichonge ukungabikho kolwazi kwiimpawu ezongezelelweyo. Akukho mbuzo ukuba unikezelo / ijika lekhonkco libonakala lilungele abo banezakhono ze-MAP. Isisikhumbuzo esihle sokuba xa usenza i-MAP, abaphathi bokuthengisa kufuneka baqwalasele yomithathu imiba ebalulekileyo yokusebenza-abantu, inkqubo kunye netekhnoloji.
Ukusebenza ngokukuko kucacile
Enye into eye yaphuma ngelixa yayijonga iziphumo zebenchmark yayikukunyuka kokuthengisa okuye kwenziwa yi-MAP. Siyakholelwa kwelona xabiso likhulu le-MAP kukukwazi ukuba nezincoko ezenzelwe wena kwi-SCALE. Kucacile kwidatha ukuba abaphenduli bayayiqonda le nzuzo.
Ukubona iNgxelo yeNtengiso yeBenchmark yokuZenzekelayo kweNtengiso:
Khuphela iNgxelo yeNtengiso yeBenchmark yokuZenzekelayo kweNtengiso
tags: ibango lentwasahloboimephuiimephuUphando lwentengisoukuzenzekela ngokuzenzekelayoiqonga lokuzenzekelayo lokuthengisauphando lwezentengisoumbikoukubuya kutyalo maliROIsurvey